Xildhibaan Zakariye oo sheegay in dalka laga saaro ciidamada Kenya iyo Itoobiya – Kalfadhi
March 7, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaan Zakariye oo ka tirsan golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, oo ka hadlayay xiisada siyaasadeed ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya, ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in ay difaacdo shacabka iyo xuduudaha dalka.
Xildhibaanka, ayaa sheegay in loo baahanyahay in Kenya la iska celiyo, waxaa uuna dhica kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay is difacaan.
“Waxaa jira qodob Midowga Africa iyo AMISOM u yaalla, kaas oo ah in dowladaha deriska ah aysan ciidamo geyn karin xuduuda dowlado ay deris yihiin, qaasatan Soomaaliya. Qodobkaasi waxaan doonayaa in la meel-mariyo oo ciidamada dowladaha deriska ah qaasatan Kenya iyo Itoobiya in dalka laga saaro. Sababta mushkilata Soomaaliya ay u dhammaan la’dahay waa intaasi”, ayuu yiri.
Xildhibaan Zakariye oo ka tirsan golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in dowladahaasi ay khalasaaso ka sameyaan meel degan, isla markaana ay kala shukaansadaan Soomaalida iyo in ay iska horkeenkooda ay ka shaqeyaan.
“Markii hore waxaa laga hadli jiray Soomaali ay hub soo siiyeen, balse hadda waxaa laga hadlayaa in iyaga ay dalkiiba heystaan, sidaad ogtahay Kenya waxaa ay naga heysataa dhul weyn oo NFD la yiraahdo, dowladda waxaa laga rabaa in berri laga bilaabo ay joojiso khaadka”, ayuu yiri.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo dowladda Norwey oo ka wada hadlay diyaar garowga doorashooyinka